ခေါင်းဆောင်မူ့သင်တန်း – MBC
မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်မြှင်ရေးနင့်ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေးဌာနက ဦးဆောင်၍ ခေါင်းဆောင်မူ့သင်တန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၄-၆)ရက်အထိ အဖွဲ့ချုပ် ၆လွှာရှိ သင်တန်းခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဖွဲ့ချုပ်ရှိ နယ်အသီးသီးမှ ဆရာဆရာမ(၂၈)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ပထမနေ့တွင် ဖွင့်ပွဲဝတ်ပြုခြင်းနင့် မိတ်ဆက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ခေါင်းဆောင်မူဆိုင်ရာ သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကို Rev. ဦးလင်းစိန်မှ သင်ကြးပါသည်။ “ ပဋိပက္ခကို နားလည်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်ကြားမူ” ကို M.I.Tမှ ဆရာမ ဒေါ်သန်းသန်းအေးက အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် သင်ကြားပို့ချပါသည်။
ဒုတိယနေ့တွင် သမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကို Dr.Moopanမှ အဘိဂဲလ၏ ပြဿနာဖြေရှင်းမူခေါင်းဆောင်နည်းပညာ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၁ရာ၂၅း၁၄မှ၃၁ ကိုအခြေပြုလျက်သင်ကြားပါသည်။ Rev. Dr. ဦးအေးမင်းက ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်းခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် (ဝတ်ပြု. ၁၉း၃၄ မှ ၃၅အထိ။ ၂ရာချုပ် ၆း၃၂မှ၃၃) သင်ကြားပါသည်။ ဆရာအောင်အောင်က Social mediaနင့်ဆိုင်သော သင်ခန်းစာများ၊ ဆရာမတင်တင်ရီက ဥပဒေဆိုင်ရာအထွေထွေသိကောင်းစရာများကို သင်ယူဆွေးနွေးကြပါသည်။
နောက်ဆုံးနေ့တွင် Rev. ဦးကျော်မိုးက ဗာနဗနှင့်ရှောလုခေါ်ယူခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တမန်တော် ၁၂း၂၀-၁၃း၄။ ဟေရှာယ ၆း၈ ကို အခြေပြု၍ သမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားပေးပြီး၊ ဆရာမဒေါ်သန္တာရွှေက အသင်းတော်များတွင် ခေါင်းဆောင်များ စဉ်ဆက်မပြတ် မွေးထုတ်ခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သင်ခန်းစာ သင်ကြားပါသည်။ ထို့နောက် ပိတ်ပွဲဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြပြီး အတူတကွ ညနေစာသုံးဆောင်လျက် သင်တန်းကိုအဆုံးသတ်ခဲပါသည်။